လူမဟုတ်သော..ရောဂါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူမဟုတ်သော..ရောဂါ
Posted by မိုးချမ်းမြေ့ on Jun 21, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
ရက်ပါတွေလိုဆိုရမှာလား။ အဲ့လိုဆိုရင်ပိုမိုက်မယ်ထင်တယ် :-)
စာသားတွေက အရမ်းမိုက်တယ် …. ။
တရားပြလျှင် ခေတ်နဲ့ လျှော်ညီတဲ့ စာသားတွေပဲ ဟီး
ခုနှစ်ပိုင်း.. ကွန်ပြူတာတွေက..အရမ်းကောင်းလာတာ လူနဲ့နီးစပ်လာတာ. သတိထားမိတယ်..
ကွန်ပြူတာအတွင်းကျကျ.. ဒစ်ဂျစ်ဘိုင်နရီအထိကြည့်ရင်လည်း.. လူနဲ့..ကွန်ပြူတာဟာ.. တော်တော်နီးစပ်တူတာတွေ့ရပါတယ်..
ဥပမာ. ကွန်ပြူတာက.. 0နဲ့ 1.. ဘိုင်နရီတွေ..။ လော့ဂျစ်မှာဆို.. ဖွင့်ပိတ်..01 ပဲလေ..
လူက.. ဥပါဒ်ဌီဘင် (ဖြစ်ရပ်ပျက်)..
ဆိုတော့.. -10+1 ဖြစ်နိုင်တာပဲ..။
ကွန်ပြူတာစက်ကြီးထဲက.. မီမိုရီဖြစ်တဲ့.. ဟဒ်ဒစ်ထဲ.. ဘာမှဓါတ်အားမသွင်းထားရင်.. အထဲမှာ.. သံလိုက်မှုံလေးတွေကပ်ထားတဲ့..အပြားကလေးပဲဖြစ်တာပါ..။
အဲဒါကိုလျှပ်စစ်ဓါတ်သွင်း.. တမိနစ်အပါတ်ရေ ၁၀၀၀၀လောက်နဲ့..လည်ခိုင်းလိုက်ပြီး.. လိုတာလေးတွေ..အစီအရီဆွဲထုတ်တော့.. OS ကြီးအသက်ဝင်..အဲဒီကနေမှ.. အင်တာနက်တွေနဲ့.. ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့..Visual ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လို့လာပါတယ်..။ အကုန်လုံးက.. ဘိုင်နရီ01 လေးတွေနဲ့.. လုပ်ထားတာပါပဲ..
ကွန်ပျူတာစက်ကြီးကို.. လျှပ်စစ်ဖယ်နှုတ်လိုက်ရင်.. Visual ကမ္ဘာကြီးပျောက်သွားတော့တာပေါ့..
သူကြီးရေ… ကွန်ပြူတာ မဟုတ်ဘူးလေ… ကွန်ပျူတာမှ စာလုံးပေါင်း အမှန်ဖြစ်ရမယ်လေ… သူကြီးနော် သူကြီး….
သူကိုယ်တိုင် မှားနေပြန်ပါပြီ…. အောက်မှတော့ အမှန်ရေးပြီး အပေါ်က ဘာလို့ ပြူတာ ပေါင်းထားတာလဲလို့… ဂယ်ပဲ လူကြီးဖစ်ပြီးတော့…
စက်ရုပ်ကတော့ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်သလို ခိုင်းတာထက်လဲပိုမလုပ်တတ်ပြန်ဘူး၊
လူကတော့ ခိုင်းတာကို လုပ်ချင်မှလုပ်သလို မခိုင်းပေမယ့်လဲ လုပ်သင့်တာကို လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ လူလဲ ခိုင်းတာကိုပဲ လုပ်နေရတာပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး)ကို ဘယ်သူက ခိုင်းနေလဲ ပြန်ကြည့် . . . ။
ကြည့်မှန်တစ်ချပ် ပို့ပေးလိုက်မယ်။ စောင့် . . . ။
ကိုပေါက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ.. အေအိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့.. ရောက်စီနဲ့တွေ့ပေးလိုက်မှနဲ့တူတယ်..။
Sex robots are not just the future, they’re already here
04.22.12 | 05:25 pm
If we’re to believe Steven Spielberg’s 2001 sci-fi flick AI: Artificial Intelligence, sex robots aren’t supposed to happen until at least the 22nd century . . . But two researchers in New Zealand now think otherwise, offering up the possibility ofahypothetical red light district filled with android prostitutes in less than four decades.
Imagine it’s 2050.
“The Yub-Yum is Amsterdam’s top sex club for business travelers located besidea17th century canal house on the Singel,” writes futurist Ian Yeoman and sexologist Michelle Mars in an article for the scholarly journal Futures. “It is modern and gleaming with about 100 scantily clad blonde and brunettes parading around in exotic G-strings and lingerie. Entry costs €10,000 for an all inclusive service.
စိတ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဘ၀င်မကျရင် မကျသလို ပေါ့
အဲဒီ အဖြေဟာ = စိတ် ဖြစ်ပါဂျောင်း
ဒါပေမယ့်…ရွာသာကြီးက အရူးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲ…”ဥမ္မတက” အရူးကိုဆိုလိုတာပါ။
ဖြတ်သန်းနေထိုင်သူများကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီလိုမျိုးအမှားအမှန်ကို ပိုင်းခြားပြီး…
ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်ချက်၊ ပြောဆိုချက်၊ နေထိုင်ချက်တွေဟာ ပရန်းပတာနိုင်နေမယ်ဆိုရင်…
ထိုသူဟာ…ကိုယ့်ကံတွေကို ကိုယ်မပိုင်ခြင်းကြောင့် လူကို အစိုးရမှာမဟုတ်ပဲ…
ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်ချက်၊ ပြောဆိုချက်၊ နေထိုင်ချက်တွေဟာ ပရန်းပတာနိုင်နေမယ်ဆိုရင်…)
စာကြောင်းရေ (၆)ကြောင်းမြောက်မှာ…(အဲဒီလိုမျိုးအမှားအမှန်ကို ပိုင်းခြားပြီး…မဟုတ်ပါပဲ)
လူတွေ လူတွေ သေကြေကြ
ရှေးတရားကို ခေတ် စကားနဲ့ ဆိုကြပြီ..
ကြုံတော့မှ ခန္တာနဲ့ ကွန်ပျူတာ တွဲပြပါ့မယ်…
လူကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်နဲ့လေ….း)
လ နှစ်ချောင်းငင် လူ
ပူ နှစ်ချောင်းငင် ပူ
မူ နှစ်ချောင်းငင် ဝက်စိနှလုံးပေါက် မူး
လူ ၊ ပူ ၊ မူး
လူနဲ့ ကွန်ပူတာ ဘယ်လိုလုပ်တူမှာဒုံး
လူက ချီးပါတယ် သေးပေါက်တယ်
ကွန်ပူတာ ချီးပါတာ ဘယ်သူတွေ့ဘူးလို့လဲ
ဟုတ်ပါရဲ့ Recycle Bin က
အိမ်သာ ကမုတ်ပုံ ဖြစ်သင့်တာပေါ့ ။
လူနဲ့ ရောဂါ vice versa